မျှော်လင့်နေသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ – ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မျှော်လင့်နေသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ – ၂	11
မျှော်လင့်နေသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ – ၂
Posted by အောင် မိုးသူ on Aug 21, 2015 in Creative Writing, Movies/TV | 11 comments
Disney ဖက် သွားပြီးတော့ Dreamwork ဖက် ပြန်လှည့်ပါဦးမယ်။ Disney နဲ့ Dreamwork ကတော့
ပြိုင်ဖက်တွေဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ကျတော့်အထင်ကတော့ နှစ်ဦးစလုံးဟာ Animation ပိုင်းမှာ
Disney ဟာလည်း သူ့ဟန်နဲ့ သူသွားနေသလို Dreamwork ဟာလည်း သူ့ဟန်နဲ့ သူသွားနေတာပါပဲ။
Dreamwork က 2002 ခုနှစ်က ထုတ်တဲ့ Animation ကားတစ်ကားဟာ အောင်မြင်မှုတော်တော်
ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့သည်ကားကတော့ ‘Ice Age’ ပါ။
2002ခုနှစ်မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ ‘Ice Age’ ဟာ ရေခဲခေတ်က သတ္တ၀ါတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားပါ။
Manny ဆိုတဲ့ ရေခဲခေတ် အမွှေးရှည်ဆင်
Sid ဆိုတဲ့ ရေခဲခေတ် က ခွေးတူဝက်တူလိုရယ်
Diago ဆိုတဲံ ရေခဲခေတ်က ကျားတစ်ကောင်ရယ်
Scret ဆိုတဲ့ ရေခဲခေတ်က ရှဉ့်တစ်ကောင်ရယ် အဓိက ဇာတ်ကောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတည်ဆောက်
Manny, Sid နဲ့ Diago တို့ဟာ အတူတကွနေထိုင်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေများဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းစစချင်းမှာ
တော့ ရေခဲခေတ်ဦးက သတ္တဝါတွေအကြောင်းကို အသားပေးထားတာပါ။ ရေခဲခေတ်မှာနေထိုင်တဲ့
လူတွေရဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက် ပျောက်သွားရာကအစ ဇာတ်လမ်းကိုတည်ထားပါတယ်။ သူတို့သုံးဦး
ဟာ ကလေးကို ရှာတွေ့ဖို့အရေးကြိုးစားပုံကို ရယ်စရာနဲ့နှောပြီး ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Ice Age ဇာတ်ကား
တွေထဲမှာ ထူးခြားတာတစ်ခုက Scret ဆိုတဲ့ ရှဉ့် ဇာတ်ကောင်ဟာ ဇာတ်လမ်းထဲမပါဘဲ သက်သက်ခွဲ
ထွက်ကာ သူသိပ်မက်မောက်တဲ့ သစ်ကြားသီးကို မရရအောင် ကြိုးပမ်းပုံကို ဇာတ်လမ်းဆပ်စပ်ကာ
ဟာသနှောပြီး ပြသတဲ့ အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ IMDB Rating 7.6 ရထားပါတယ်။
Ice Age : The Melt Down (2006)
2006ခုနှစ်မှာတော့ Ice Age : The Melt Down ဆိုပြီး နော်ကဆက်တွဲ ဇာတ်ကားထွက်ခဲ့ပါတယ်။
သည်ဇာတ်လမ်းမှာတော့ သူတို့နေတဲ့ နေရာဟာ နောက်ဆိုရေတွေလွှမ်းခံရတော့မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း
သိတဲ့အချိန်မှာ ဘေလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းကြရင်း ရေလွှမ်းရင် ကယ်တင်နိုင်မယ် သစ်ခေါင်းလှေကြီးရှိရာကို
ခရီးဆက်ရင်း ဇာတ်လမ်းကို အခြေပြုထားပါတယ်။
Manny ဟာ ကမ္ဘာမှာ သူဟာ အမွှေးရှည်ဆင်နောက်ဆုံးမျိုးဆက်လို့ သိထားရာက သူ့နဲ့ မျိုးတူ
အမျိုးရှည်ဆင်နောက်တစ်ကောင်ကို ထပ်မံတွေ့ရတဲ့အခါ ဇာတ်လမ်းကို ပုံဖော်ထားပါတယ်။
တစ်ကားနဲ့တစ်ကား မရိုးတဲ့ရသပေးတဲ့ Ice Age ဟာ တတိယမြောက်တစ်ကားမှာတော့ ရေခဲခေတ်ကနေ
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဒိုင်နိုဆောတွေနေတဲ့ နေရာကို တွေ့ရတဲ့ နေရာကနေ အခြေတည်ထားပါတယ်။ ပထမကား
ကနေ စလို့ ဇာတ်လမ်းကို အဆက်မပြတ်ရိုက်ကူးခဲ့ရာကနေ Dawn of the Dinosaurs ဟာ စွန့်စားခန်း
ဘက် အနည်းငယ်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကားတစ်ကား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
2016 မှာစောင့်မျှော်ရမယ့် နောက်ဇာတ်ကားတစ်ကားကတော့ ICE AGE 2016 ပါ။
အရင်ကားတွေထက် အချိန်တွေနောက်ကျမှ ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမျိုး
ခံစားမှုအရသာတွေ ပေးဦးမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စွာစောင့်မျှော်နေရင်း။
@QUIL@ says: Ice Age 4: Continental Drift 2012
အောင် မိုးသူ says: တစ်ကားကျန်ခဲ့တယ် ပြန်ဖြည့်လိုက်ပါ့မယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: စောင့်ရသေးတာပါ့!!
Foolish Girl says: ICE AGE 2016 ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲမသိဘူး ?????
ဂျက်စပဲရိုး says: သူမျှော်တာက ကာတွန့်ကားတွေချည်းပဲဟ…
Attach on Titan ရုပ်ရှင် ကို မျှော်နေမိတယ်။ အတော် ကြမ်းကြမ်း ကြီးတွေ ပါမယ် ထင့်။
အောင် မိုးသူ says: အရင်ဆုံး ကာတွန်းနဲ့ စတာပါ။ နောက်လာပါ့မယ် တခြားဇာတ်ကားတွေ။ ဟီးးး
HMM says: “attack on titan” gooddrama မှာတင်ထားတာ ကျိပီးပါပီ.. လောက်မကောင်းလို့ထင်မိ…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကာတွန်းကားကြည့်ပြီး ကြိုက်ပြီး တဲ့သူတွေက သိပ်မကြိုက်ကြ။
ဂျက်စပဲရိုး says: ကာတွန်းကား ကြည့်ပြီးပြီ
သူ့ဟာက ခုတ်နေ ထစ်နေတုန်း စဉ်းစားခန်းတွေ flashback တွေ အတွေးတွေ အရမ်း ပါတော့ကာ ကြည့်ရတာ ဖီးလ်ငုတ်တယ်း)
ရုပ်ရှင် မှာတော့ အဲ့ဒီ ပေရှည်နေတာတွေ မပါတော့လောက်ဘူး ထင်လို့း)
Was this answer helpful?LikeDislike 12200
Alinsett @ Maung Thura says: Ice Age’ ကြည့်ချင်တယ်…
လုံမလေးမွန်မွန် says: အမှန်တော့ သမျာျးတို့အတွဲက ကာတွန်းကားပဲ ကြည့်တာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.